Bulshada Soomaaliya - Wikipedia
Bulshada Soomaaliya (Af Ingiriis : demographics of Somalia; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎) waa mashruuc xambaarsan macluumaad badan oo ku saabsan beelaha, reeraha, luuqadaha, tirada bulshada, heerka waxbarasho, caafimaadka, dhaqaalaha, diimaha iyo qodobo kale oo saamayn ku leh bulshada.
1 Kooxaha Bulshada
2.1 Reeraha iyo Qabiilada
Dadka Soomaalida waa bulsho ku dhaqan Geeska Afrika; gaar ahaan wadanka Soomaaliya, Jabuuti, deegaano ka tirsan wadanka Itoobiya, deegaano ka mid ah wadanka Kenya iyo meelo badan oo caalamka ah. Dadka Soomaalida ah waxay ka mid yihiin kooxaha Bulshada Soomaaliya; waana dadka ugu badan bulshada ku nool wadanka Soomaaliya. Intaas waxaa dheer, dadka Soomaalidu waxay ku hadlaan Af-Soomaali oo kamid ah luqadaha Kushitiga Faraceeda Afro Aasiya.
Dadka Baajuuniga waa dad laga tiro badan yahay oo ku dhaqan Gasiirada Baajuuniga, xeebaha ku hareersan wadanka Kiinya, iyo meelo ka mid ah Koonfurta wadanka Soomaaliya. Tirokoob laga soo xigtay Ururka Qaramada Midoobay, dadka Baajuuniga ah waxaa lagu qiyaasay wax ku dhow 100,000 qof kuwaasi oo intooda ugu badan ku nool yihiin wadanka Kiinya. Dhinaca kale, wadanka Soomaaliya waxaa ku nool tiro lagu qiyaasay ilaa 20,000 qof kuwaasi oo intooda ugu badan ku dhaqan koonfurta dalka.
Beeraha dadka Baantuuga meel u dhow Kismaayo.
Adoon Baantuu ah magaalada Muqdisho (1882–1883).
Dadka Baantuuga sidoo kale loo yaqaano Jareer, Gosha, iyo Mushunguli, waa dad laga tiro badan yahay oo ku dhaqan koonfurta wadanka Soomaaliya, meelo u dhow Wabiga Jubba iyo Wabiga Shabeelle. Dadkani waxay asal haan ka soo jeedaan dadka Baantuuga kuwaasi oo asal ahaan ku dhaqan koonfurbari qaarada Afrika. Dadka Jareerta Soomaaliya waa kuwo lagu keenay wadanka nidaam gumaysi ah.
Reer Benaadir sidoo kale loo yaqaano Reer Xamar waa bulsho ka mid ah dadka Soomaalida kuwaasi oo ku dhaqan magaalada Muqdisho, meelo badan oo ka mid ah gobolka Banaadir ee wadanka Soomaaliya.
Reer baraawe sidoo kale loo yaqaano Barwaani, waa dad laga tiro badan yahay oo ku dhaqan meelo ka mid ah koonfurta wadanka Soomaaliya. Dadkani waxay deegaan magaalada Baraawe ee Gobolka Shabeellaha Hoose, waxeena ku hadlaan luqad u gooni ah oo la dhoho Af-Baraawani ama (chimini ama chimbalazi), waa lahjad u dhow af-sawaaxiliga . Reer baraawe sidoo kale waxay ku hadlaan Af-tunni iyo af-maxaatiri. Dadka reer baraawe waa dad ganacsato ah, waxayna caan ku yihiin kaluumeesiga. waxyaabaha aad loogu yaqaano reer Baraawe waxaa ka mid ah cuntada macmacaanka ah, sida (Caano baraawe) oo soomaalida aad u xiiseeso, waa macmacaan laga sameeyo caano la karkariyay oo sunkor lagu daray iyo waxyaabo kale, kalarkiisa waxuu noqonaa gaduud, waxaa loo sameeyaa sida xalwada oo kale. Dhinaca musikada khatar ee ku yihiin, laakiin badanaa waxee ku heesaan heesaha af-baraawe, waa sida heesaha xamariga oo kale, wee ka duwanyihiin heeso dhaqameedka.
Reeraha iyo Qabiilada
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Demographics of Somalia.
↑ Abbink, p.18.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Bulshada_Soomaaliya&oldid=223911"